Prof. Jawaari oo si rasmi ah ugu dhawaaqay musharaxnimadisa xilka guddoonka baarlamaanka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Prof. Jawaari oo si rasmi ah ugu dhawaaqay musharaxnimadisa xilka guddoonka baarlamaanka
Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya.
Prof. Jawaari ayaa caddeeyay in markii labaad uu u tartamaayo xilka guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan karo xilkaasi, marka la eego musharixiinta haatan u sharxan xilkaas.
Sidoo kale, Prof. Jawaari ayaa taageero badan ka heysto qaar ka mid ah musharixiinta ugu cad cad ee u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Arrintaan ayaa hoos u dhigeeysa damaca madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan uu ku doonayo inuu isku soo sharaxo doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, taas oo dhici doonta dabayaaqada bishaan aynu ku jirno ee Janaayo.
Dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenada koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan waxaa u sharaxan ilaa iyo 5 xildhibaan, waxaana musharixiintaasi ka mid ah wasiirkii hore ee xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Saciid Xuseen Ciid.
Musharax Saciid ayaa kamid ah xildhibaanada xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cusub kula tartamaya Khadiijo Diiriye, C/weli Muudey iyo Jeylaani Iikar oo dhamaantood hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee haatan waqtigiisa dhamaaday.